Nweta itinyekwu Hacks - Ihe Ị Ga-Mara Tupu - Foneelu Of The Day
Ikpebi nweta foneelu hacks ga-etinye gị na-edu ndú nke na-eme ihe dị mma na ndụ gị, dị ka ị ga-enwe ike na-elekwasị anya ihe na ọ bụ kpamkpam a echiche nke gị nkwa na-enwe ihe ịga nke ọma.
The foneelu hacks mmemme na ọ bụ a na-ekpo ọkụ nnweta ụbọchị ndị a na price nke ịmụ ahia nzuzo nke mmadụ dị ka onye ihe ịga nke ọma dị ka Russell Brunson abịa na a na-eri.
E nwere ihe dị nnọọ nta mgbubilata a ego. Russell bụ nnọọ ogologo gị si na oge ị na-arụ ihe ọ na-achụ, ọ na-ahapụ gị mara ogologo ụzọ o nwere iji nweta n'ebe.
Ọ bụrụ na ị na-aga banyere azụmahịa gị atụmatụ ụzọ ziri ezi, ị ga na-na-ohere na-enwe ihe ịga nke ọma. Ma anaghị atụ anya ka ya na ime n'otu ntabi anya.
Filed Under: Funnel Hacks Tagged With: nweta foneelu hacks